Single Row Crossed Roller Slewing Bearing Factory - China Single Row Crossed Roller Slewing Bearing ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
တရုတ်စက်ရုံမှ welding positioner အတွက် Slewing bearing ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။slewing ဝက်ဝံဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း။
ပြင်ပဂီယာ 111 စီးရီး swing bearing ပါသော အတန်းဖြတ် ရိုလာတုံး လှည့်ကွင်း
single-row cross-roller slewing bearings ၏ အားသာချက်များမှာ-
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တွန်းအားဖြန့်ဖြူးမှုသည် အလွန်ထူးခြားပြီး ပုံပျက်ခြင်းကို ခုခံနိုင်စွမ်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
တိကျသောနေရာချထားမှုသည် ပိုအားကောင်းပြီး အော့ဖ်ဆက်အမှားသည် သုညနီးပါးဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောလည်ပတ်တိကျမှု၊ ပုံပျက်ခြင်းကိုပြင်းထန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ကြီးမားသောသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကဲ့သို့သောအားသာချက်များရှိသည်။
ဂီယာမဲ့ ဆိုလာခြေရာခံကိရိယာ 110.25.500 အတွက် Slewing Bearing အတန်းတစ်ခုတည်း
တစ်တန်းတည်းဖြတ်ထားသော roller slewing bearing၊ ထိုင်ခုံနှစ်ခု၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ ထုတ်လုပ်မှု၏မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တပ်ဆင်မှု၊ တပ်ဆင်မှုတိကျမှုလိုအပ်ချက်အနည်းငယ်ကွာဟချက်မြင့်မားသည်၊ 1: 1 ကြက်ခြေခတ်စီစဉ်ထားသော roller သည် axial force ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လှန်လိုက်သည့်အခိုက်အတန့်နှင့် ကြီးမားသော radial force ကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အင်ဂျင်နီယာစက်ပစ္စည်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို ရုတ်သိမ်းရာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
Slewing ring ကို rotary bearing လို့လည်းခေါ်ပါတယ်၊ အချို့လူတွေက rotary support၊ cyclotron support။ နာမည်တွေကတော့ slewing bearing၊ Slewing Ring bearing၊ turntable bearing နဲ့ Slewing Ring ဖြစ်ပါတယ်။ Slewing support ကို တကယ့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပြီး Joint လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စက်၏"၎င်းသည် အရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှင့် bear axial force၊ radial force နှင့် tilting moment ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် နှိုင်းရ rotary ရွေ့လျားမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော စက်အတွက် လိုအပ်သော အရေးကြီးသော ဂီယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ယန္တရားလုပ်ငန်း၏ လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ slewing support ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး စက်ယန္တရားများ၊ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများ၊ သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ စက်ယန္တရားများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ယန္တရားများ၊ စက်မှုစက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
XZWD အတန်းဖော်ဘောလုံးကို ဂီယာတပ်ထားသော သွယ်လျှောလျှောကွင်းဝက်ဝံများ
ထုတ်ကုန်များကို အင်ဂျင်နီယာ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး စက်ယန္တရားများ၊ သတ္တုနှင့် သတ္တုတူးဖော်ရေး စက်ပစ္စည်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်မှ စက်ယန္တရားများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး စက်များ၊ အပေါ့စား စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်များ၊ ရေနံဓာတုဗေဒ စက်ပစ္စည်းများ၊ အင်ဂျင်နီယာ ယာဉ်များ၊Slewing ring သည် axial, radial load နှင့် tilting moment load ကို တစ်ပြိုင်နက် ထမ်းနိုင်သည်။၎င်းကို pinion၊ planetary gearbox နှင့် motors တို့နှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်...
Wanda အဖွဲ့သည် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုစိတ်ဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းများ၊ အမြန်တုံ့ပြန်မှု၊ ချက်ခြင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် စျေးနှုန်းချိုသာသော ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာကို အာရုံစိုက်ရန် ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ကြီးထွားလာနေသော တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။သင်၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များအတွက် bearing ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းသည် ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသည့်အပြင် ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင် သင့်အား ကူညီပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လျှပ်ကူးလက်စွပ်အချင်းသည် 200 မီလီမီတာမှ 5000 မီလီမီတာအထိ ရှိနိုင်သည်။ လျှောလျှောမောင်းအတွက် မော်ဒယ် 60 ကျော်တွင်3လက်မမှ 25 လက်မအထိ အရွယ်အစား (၉) မျိုး ရှိပါသည်။
တာဝါတိုင်ကရိန်းအတွက် XZWD တစ်ခုတည်းအတန်းဘောလုံး slewing bearing turntable
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်တိုင်းကို အာရုံစိုက်ပြီး ထိန်းချုပ်သည်၊ ဖောက်သည်များထံသို့ ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များ ပို့ဆောင်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
Slewing bearing ၏ပစ္စည်းသည် 42CrMo,50Mn ကဲ့သို့သော ယေဘုယျအားဖြင့် မြင့်မားသော အလွိုင်း-ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သံမဏိများဖြစ်သည်။
rolling body ၏ ပစ္စည်းမှာ GCr15 ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံး ပြည်တွင်း ပေးသွင်းသူများထံမှ ဝယ်ယူပါသည်။
ထုတ်ကုန်တွင်ရရှိနိုင်သည်- တစ်တန်းနှင့်နှစ်တန်းဘောလုံး၊ အတန်းသုံးတန်း Roller၊ Cross Roller အလုံပိတ်နှင့် Unsealed Internal Geared၊ External Geared နှင့် Non-Geared Clearance သို့မဟုတ် Preloaded။
XZWD |ပြင်ပဂီယာ Precision Crossed roller Slewing Bearing
single row crossed roller bearing ကို applications အများအပြားတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည် ။
Slewing ring သည် axial, radial load နှင့် tilting moment load ကို တစ်ပြိုင်နက် ထမ်းနိုင်သည်။၎င်းကို pinion၊ planetary gearbox နှင့် motors တို့နှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်...
ပေးပို့ချိန်ကို သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တင်းကျပ်သော ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား၊ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားကို အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
Lifting သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သုံးသော စိတ်ကြိုက် OEM Roller Slewing BearingXZWD
1. ထိုင်ခုံကွင်း နှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
3. မြင့်မားသောတိကျမှု၊ သေးငယ်သောရှင်းလင်းမှု
4. axial force၊ ထွက်ပေါ်လာသော အခိုက်အတန့်နှင့် ကြီးမားသော radial force ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
XZWD Roller Precision Slewing Bearing ပြင်ပဂီယာ
Roller နှင့် raceway orientation ကို ဝင်ရိုးမှ 45 ဒီဂရီတွင် နေရာချထားပါသည်။
ဤဒီဇိုင်းများအတွက် တည်ငြိမ်သော loading စွမ်းရည်သည် roller surface contact area နှင့် ဆက်စပ်သော လေးခုနှင့် 8 point contact bearings များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး သာလွန်ပါသည်။
ဤဒီဇိုင်းတွင် တောင့်တင်းမှုသည် ပိုမိုမြင့်မားသော လည်ပတ်အမြန်နှုန်းကို ရရှိစေပြီး တပ်ဆင်ခြင်းတွင် မှားယွင်းသော ဒီဂရီပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ radial thrust ကန့်သတ်ချက်များသည် လေးချက်နှင့် ရှစ်အချက် ဆက်သွယ်မှု ဒီဇိုင်းပုံစံထက် နည်းပါသည်။